Filànkevitra GV : Misokatra ny fisoratana anarana sy ny fanavaozana ho an’ny 2021! · Global Voices teny Malagasy
Mirotsaha amin'ny fananganana GV matanjaka.
Voadika ny 13 Janoary 2021 7:59 GMT
Eh, ry vondrompiarahamonina GV ! Tonga indray ity ny fotoana isantaona, ary dia nosokafana indray ny Fisoratana anarana / fanavaozana ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina ho an'ny taona 2021.
Ny 1 Febroary 2021 no fetra farany hisoratana na hanavaozana.
Raha efa ao anatin'ny Filankevitra ianao ary maniry ny mbola hanohy, iangaviana hitsidika ny faritra natao hofenoina ka hameno izany, segondra monja no ilaina ✅
Hanohy ny asantsika efa natao tamin'ny 2020 ny Filankevitra 2021, isan'izany ny fidirana anatin'ireo Vondron'Asa hiatrehana ireo olana toy ny fifanofànana, ny talenta anatin'ny vondrompiarahamonina, ary ny fahafahana miditra/mahazo aminy.
Tiako ny hisaotra betsaka ny Filankevitra 2020, sary dia manantena aho ny hanohy hiaraka hiasa aminareo rehetra 💪
Vaovao amin'ny filànkevitra ve? Fenoy ilay fisoratana anarana!
Raha mpandray anjara ato amin'ny GV ianao fa mbola tsy nandray anjara tamin'ny Filankevitra tany aloha, nefa maniry ny hirotsaka bebe kokoa, miangavy anao hanatevina ny laharanay!
Ato amin'ny tranonkalantsika, ao amin'ny pejin'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina GV, azonao atao ny mahafantatra misimisy kokoa momba ny Filankevitra, ny ataony, ary ireo zo sy andraikitra. Rehefa voavakinao izany, mankanesa ao amin'ilay Faritra fisoratana anarana : fanavaozana ho an'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina dia ampahafantaro anay fa liana ianao.
Misaotra namaky, ary amin'izay rehetra ataonao hanampiana ny Global Voices!